March 2008 ~ စန္ဒကူး
Posted by စန္ဒကူး at 10:49 AM
လိုက်တယ်။ ဆရာ့အိမ်မှာ။ ဘယ်သူမှမရောက်သေးဘူး။ ကျွန်မစိတ်ထင်ထမင်းကြွေးမလားလို့
အိမ်ကဘာမှမစားသွားဘူး။ ဗိုက်ဆာလိုက်တာပြောမနေနဲ့။ ဆရာမကကျွန်မဗိုက်ဆာလားတဲ့။
ဆာတယ်လို့ပြောတော့အခုဘဲချက်လိုက်မယ်လေဒါဆိုတဲ့။ ကျွန်မကမစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ သူက
သူလုပ်ထားတဲ့ ဒိုးနပ် (Donuts) တွေကိုချကြွေးပါတယ်။ ဖျော်ရည်လဲဖျော်တိုက်တယ်။ ညီမ၀မ်း
ကွဲတာဝန်က အာလူးပြုပ်ထားဖို့။ သူပြုပ်ထားတဲ့အာလူးတွေကိုဒီဘက်ဆရာအိမ်ကိုသယ်လာဖို့
သူတစ်ယောက်တည်းမနိုင်ဘူး။ သူ့မှာမျောက်လောင်းလေးတစ်ကောင်လဲရှိသေးတာကိုး။ ဖုန်း
စားနေရင်းနဲ့၊ ဗိုက်ဆာလို့သာစားရတယ်၊ ဒိုးနပ်ဆိုတာကျွန်မလုံးဝကိုမစားတဲ့အရာ၊ဒါပေမယ့်ဆရာ
တော့ထမင်းဝင်စားတော့တာဘဲ။ သူ့ယောက်ျားနဲ့ယောကထီးနဲ့။ ဘာဟင်းလဲဆိုတော့တူနာငါးကို
ငရုတ်သီးကြက်သွန်နီနဲ့ကြော်၊ တူနာငါးကိုအလွတ်ကြော်၊ မုန်လာထုပ်ကိုကြက်ဥနဲ့ကြော်ဗိုက်ဆာ
တော့မောလိုက်တာ။အာလူးသယ်တဲ့သူကမမောရဘူး။ ကျွန်မကမောတာ။ရောက်တာနဲ့ ကြက်သွန်
နီအခွံခွာ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ခရမ်းချဉ်သီး၊ အာလူးကိုပါးပါးလှီး။ ကိုကြီးကဆရာမကိုအာလူးပြုပ်ထားပေး၊
ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူကိုတော့ blender နဲ့ရိုက်ထားပေးပါလို့မှာတာနားကြားလွဲပြီးဆရာမကအာလုံးကို
blender နဲ့ရိုက်ဆိုတော့အောင်မလေးလေး။ မလွယ်ဘူး တစ်ခါမှမကြားဖူးပါလား။မထူးဘူးသူအနှစ်
မတတ်နိုင်ဘူး၊ အချိန်လဲမရှိဘူး၊ ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ညီမကတော့ကလေးအငယ်တွေနဲ့ဆိုတော့စောစော
ကျွန်မပြန်တော့ ၁၀နာရီကျော်ပြီ၊ ကားလဲမရှိတော်တော်စိတ်ပျက်တယ်။တော်သေးတယ်
တယ်။ အိမ်ထိပြန်လိုက်ပို့တယ်။ အဲဒါလဲဒီမှာတစ်ဒုက္ခ။အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှလက်တွေပူနေတာသတိ
ထားမိတယ်။ ပူတာမှတော်တော့ကိုပူတာ..ထိုင်ပြီးအော်နေလိုက်တယ်တစ်ယောက်တည်း။ ကြားတဲ့သူ
နောက်နေ့တနင်္ဂနွေရောက်တော့ပန်းဝယ်ဖို့ကိစ္စကိုစဉ်းစားရတယ်။ ဘယ်မှာဝယ်ရင်ကောင်းမလဲ၊ အချိန်
လဲမရှိနေကအသေပူ။ ကားလာခေါ်တော့ ၁၁း၃၀ ရှိပြီ။ ဘွဲယူတဲ့အစီအစဉ်က ၃း၀၀နာရီစမှာ၊ ကျောင်းနဲ့
ကျွန်မနေရာနဲ့ဆို ၄၅ မိနစ်လောက်ဝေးသေးတယ်။ကျောင်းကတော့ကျွန်မတို့ရုံးလက်အောက်ကကျောင်း တွေအများကြီးထဲကတစ်ကျောင်းပါဘဲ၊ ကျွန်မနေတဲ့မြို့နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာuniversity၂ခု (ရုံးကဖွင့်ထားတဲ့) ရှိတဲ့အထဲမှာဒီကျောင်းက ပိုနိုင်ငံခြားသားများပြီးကျောင်းသားပေါင်းသောင်းချီရှိတယ်။ ဈေးလဲပိုသက်သာ
တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားprofessor နည်းတယ်။ကားမောင်းတဲ့သူကို ကိုကြီးက shortcut
ဆိုတဲ့လမ်းကိုမောင်းခိုင်းတာ။ ဖုန်တွေချည်းဘဲ။ ကျွန်မဒေါသထွက်လို့စိတ်ထဲကနေခေါင်းခေါက်နေတာ
မှာ။လှေခါးနဲ့အိုးတွေကိုသယ်၊ ဆင်ရတာယောက်ျားလေးတွေသယ်ပါတယ်။ ဟိုရောက်မှအဲဒီအခန်း (အကာ)
မပါမှာတံမြက်စည်းလှည်း၊ ခုံတွေခင်း၊ ဂေါ်ဖီတွေသုပ်ဖို့လုပ်တော့လှီးထားတဲ့ဂေါ်ဖီတွေကအကုန်ပုပ်ကုန်ပြီ။
ရေစင်စင်ဆေးပြီးသုပ်ရတော့တာပေါ့။စားဖို့ပြင်ဆင်ထားတာ(၆၀)စာ။ လာတော့လူက ၂၀ လောက်၊ အဲဒီ
ကြီးဘဲ။ နေပူပူမှာ၊ ဒါတောင်အကျနေနော်..ကျွန်မဆိုချွေးတွေထွက်တာပြောမနေနဲ့။အစီစဉ်စမှာ၃နာရီ
သီချင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့ကနေကာမျက်မှန်တွေနဲ့တက်ဆိုပြီးပြီ၊ဘွဲ့ယူသူတွေများတာလဲမပြောနဲ့ IT, Education,
nursing, dentist, science,others Degree,Bachelor,Mastor,Doctoral အစုံဘဲ။ သူတို့တန်းစီနေတဲ့
၀တ်စုံအပြည့်စုံနဲ့။ ဦးထုပ်တွေကလဲဌက်မွှေးလိုမျိုးတွေထောင်ထောင်အရှည်ကြီးတွေ၊နဲ့ ဗိုလ်တွေဓားတွေ
ကိုင်ပြီးဆင်းလာတော့ကျွန်မကဘာများလဲလို့။ နောက်တော့သူတို့ကအရင်ဆုံးချီတက်သွားတယ်။ မိုက်
လိုက်တဲ့ဘဲတွေကွာ.ရုပ်မချောပေမယ့်သန့်ခန့်ပြန့်၊ အရပ်တွေက..အမြင့်ကြီးတွေ၊၀တ်စုံတွေနဲ့၊ ဆံပင်ညှပ်
ငါလဲ PhDယူပြီးရင်ဒီကျောင်းမှာလာပြီး Marching လုပ်အုံးမှလို့စိတ်ကူးယဉ်...
Posted by စန္ဒကူး at 4:26 AM
တစ်ကယ့်အကောင်လေးတွေလို့ထင်ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ graphic ပညာလေးစားလောက်
ပါတယ်။ လက်ရာလဲတော်တော်မြောက်တယ်။ ကြည့်ရင်းနဲ့ ရီစရာလေးတွေဖြစ်နေလို့ သူငယ်
ကျွန်မလမ်းမှာတွေ့တဲ့ အလုပ်သမားတွေကို " မင်္ဂလာပါ"
အကူညီလို့ရင်..ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်မကို......ဟာ ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်...
အာ..သွားစမ်း..ဝေးဝေးမှာသွားနေ၊ မီးဖိုချောင်ထဲလာရှုပ်မနေနဲ့ လို့အော်လိုက်တယ်။
တဲ့ပန်းလေးတွေကိုခူးလာခဲ့ပေးတာ၊ အရောင်စုံလေးတွေ၊ သူမင်းဘေးမှာတိတ်တိတ်
လေး လာရပ်နေတာ..မင်းကိုတအံ့တစ်သြမဖြစ်စေချင်လို့ပါ၊ မင်းသူ့မျက်လုံး
ဟုတ်မေမေ..ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခြံထဲမှာသွားခူးလာခဲ့တာ၊ မေမေ့အတွက်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပန်းလေးတွေက မေ့မေ့လိုဘဲအရမ်းလှတယ်။ မေမေကြိုက်မယ်လို့သားထင်သားဘဲ..အထူးသဖြင့် နှင်းပန်းအဖြူလေးတွေ။
အကယ်လို့သင်ဟာမနက်ဖြန်သေသွားမယ်ဆိုရင် သင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ companyက သင့်နေရာ
မြုပ်နှံသင့်တယ်ဆိုတာနားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါစဉ်းစားဥဏ်မရှိတဲ့အတွေးတစ်ခုပါ၊ ပိုက်ဆံရှိမှ
မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ဖခင်၊မိခင်နဲ့ ကျွန်တော်/မ တို့တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦးချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့
ပေါ်မှာချိုသာစွာပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ပေမယ့် မိသားစု၊ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူ
ဆိုရင်တော့သူများကိုစိတ်တိုတာတွေ၊ အလုပ်မှာအဆင်မပြေတာတွေ၊ နေမကောင်းတာတွေအကုန်
လို့ထင်ချင်ထင်မယ်။ ကျွန်မအမေကတော့သူတစ်ကာကိုလိုက်ရှင်းပြတယ်၊ သူကနေမကောင်တော့
အလိုလိုနေရင်းစိတ်တိုနေတာအမြဲတမ်း၊ ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးပါစသည်ဖြင့်ပေါ့။ အဖေကဖျော်ရည်
စိတ်တိုလို့၊ ငါ့ကိုဒီလိုဖြစ်အောင်သူတို့ဘဲလုပ်တာဆိုပြီ။ အတွေးတွေကလွဲချော်နေတယ်။ ပြန်တွေး
ကြည့်ရင်တစ်ကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဘူး။ ကျွန်မချစ်သူ၊ ကျွန်မအရမ်းရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုလဲ ကျွန်မ
စကားကောင်းကောင်းတစ်ခါမှမပြောဘူး။ ဘုနဲ့ဘောက်။ ပြောပြီးတိုင်း..ဖုန်းချတိုင်း ငါဘာလို့ဒီလို
ပြောမိပါလိမ့်၊ နောက်ဆိုငါချိုချိုသာသာကောင်းကောင်းပြောမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလဲ အကြိမ်
လိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရော ???
(မှတ်ချက်၊ ကျွန်မကိုစိတ်တိုအောင်မပြောရင်ပြောတာပါ၊ ပြုပြင်တော့မယ်လို့)
Posted by စန္ဒကူး at 9:19 PM
လေးမြန်မာပြည်က Gold Roast Coffemix ကြော်ငြာက ခေါင်း/ကောင်းတယ် လို့ပြောတဲ့ပတောင်
ဖုန်းဆက်ပြီးလူကိုအထင်သေးစကားတွေလာပြောတဲ့သူကလဲရှိသေးတယ်။ စကားမပြောချင်လို့လား၊ ဘေးနားမှာဘယ်သူရှိလို့လဲဘာညာစကားနာထိုးတာလောက်မုန်းတာမရှိဘူး.မနက်နိုးတော့လက်သန်း
တောက်ညင်ကပ်လာတယ်။ တကယ်ပေါတာ.. ဘာဆိုဘာမှမယ်မယ်ရရချက်ကိုမစားဖြစ်တာ၊စား
ချင်စိတ်လဲမရှိဘူးချက်ရမှာလဲပျင်းတယ်။ မနက်ဆို နို့မှုန့်နဲ့ထမင်းစာတယ်၊နေ့လည်နဲ့ညနေကတော့
ထောပတ်ကိုထမင်းနဲ့ နယ်မြေပဲကြော်တွေထည့်၊ ငရုတ်သီးကြော်ထည့်၊ ဒါဘဲစားနေတာနှစ်ပတ်ရှိပီ။ ဟိုနေ့ညနေကတော့မုန့်ဟင်းခါးချက်စားတယ်။နောက်တော့ဒီတိုင်းဒုံယင်းကဒုံယင်းဘဲ။ဘာချက်လဲ
နေလိုက်တယ်။ပိုက်ဆံအိတ်တွေလိုက်ရှင်းတော့အထဲက၁၀၀ နဲ့ ၂၃ ကွိုင်ထွက်လာတယ်။ပျော်လိုက်
၁။ ငွေနှင်းမှိုကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီးရေဖွဖွလေးညှစ်ထား၊ အရမ်းညှစ်လိုက်ရင်မှိုပွင့်လေးတွေပုံပျက်
၂။ ကြက်ဥနှစ်လုံးခွဲ၊ ပုကန်တစ်လုံးမှာထည့်၊ ကြက်သွန်ဖြူတစ်မွှာကိုနံနံပင်နဲ့ထောင်းပြီးထည့်၊
မဆလာနဲနဲထည့်၊ ဆားနဲနဲ၊ ပဲငံပြာရည်နဲနဲထည့်ပြီးသမအောင်ခေါက်ပါတယ်။
၃။ မှိုပွင့်လေးတွေကိုကြက်ဥအနှစ်ထဲခဏလောက်စုပ်ဝင်သွားအောင်နှစ်ထားလိုက်တယ်၊ ပြီးတာနဲ့
အရသာလား၊ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ မှိုကချိုတယ်၊ ကြက်ဥကစိမ့်တယ်..ကြက်သွန်ဖြူ၊ နံနံအနံ့လေး
တက်မှာတော့သေချာနေပြီ၊ ဒီနေ့ခံစားမှုပေါင်းစုံပြီး ငရုတ်သီးအစိမ်းကိုblender နဲ့မွှေပြီးဆီနဲကကြော်၊
ထောပတ်ဆီ၊ မြေပဲ၊ မှိုနဲ့ကြက်ဥတို့ရောသမမွှေညစာအပြီးမှာတော့ မနက်ဖြန်ရဲ့နေမင်းကိုမြင်ရဖို့ဆေး တွေပဲကြီးလှော်လိုသောက်ပြီးစောစောအိပ်ရအုံးမယ်။
Posted by စန္ဒကူး at 7:43 AM
(ပုံလေးတွေသေးနေလို့ Click နှိပ်ပြီးကြည့်ရီပါ)
Posted by စန္ဒကူး at 4:29 AM
Labels: ရီမလား ပြုံးမလား, ဝေဌခြင်း
အင်္ဂါနေ့က စိတ်ကူးပေါက်လို့ မုန့်ဟင်းခါးအရမ်းစားချင်တာ။ တစ်ကူးတစ်ကလုပ်စားဖို့လဲ
တော့ကျွန်မသူငယ်ချင်းကိုကြီးကို ငါး၊ နံနံပင်၊ ငရုတ်သီး ၀ယ်လာခိုင်းလိုက်တယ်။တစ်ကယ်
တမ်းဆိုရင် ရယ်ဒီမိတ်မုန့်ဟင်းခါးရယ်ဒီမိတ်အထုတ်တွေကစားလို့မှမကောင်းဘူး။ အနံ့ရော၊
အရသာပါ တော်တော်ဆိုးတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတုန်းက ညီမ၀မ်းကွဲအိမ်မှာတစ်ခါချက်စား
တာတွေ့ဖူးတော့ နည်းကိုသိနေပြီ။ ရုံးဆင်းတဲ့အချိန်လာခဲ့လို့။ ကျွန်မရုံးဆင်းတာနဲ့အိမ်ကိုပြန်၊ ငါးကတော့ရောက်မလာသေးဘူး။ကိုကြီးရော၊ကျော်ကျော်ရောရောက်လာတာနဲ့ သူတို့ကတော့ ဒိုင်ခံလုပ်ပေးတဲ့သူတွေပေါ့၊ ကျွန်မက ညွှန်ကြားရေးမှူး...ဟီးဟီး
- ကုလားပဲနဲနဲကို ဆားထည့်ပြီး ပြုပ်လိုက်ပါတယ်။ (နူးအောင်စောင့်နေရင်အရမ်းကြာမှာမို့
နဲနဲပွလာတာနဲ့ blender ထဲကိုထည့်ပြီး မွှေလိုက်တော့ ပဲပြုပ်ရည်ရပြီ)
- ငါးကိုအကောင်လိုက်ဗိုက်ခွဲပြီးသားရေစင်အောင်ဆေး၊ ငံပြာရည်၊ ရေ၊ စပါးလင်တစ်ချောင်း
ကိုထု၊ အထုံလေးဖြစ်အောင်သူ့အရွက်တွေနဲ့ပြန်ချည်ပြီးထည့်၊ နံနံပင်လေးနည်းနည်းပါထည့်ပြုပ်
- အထုတ်ထဲမှာပါတဲ့ အကြော်ထုတ်တွေကိုတော့.. စပါးလင်အရင်းပိုင်းကိုပါးပါးလှီး၊ ထောင်းပြီး
ထပ်ထည့် ဆီပြန်သတ်ပါတယ်။ ပြီးမှ
- ငါးအဖတ်တွေကိုထည့် ပြီးဆီသတ်၊ အရောင်တင်မှုန့်ထည့်ပြီး အိုးကြီးထဲမှာရေထည့်လိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါ နှစ်ခါ ပွက်ရင်တော့အင်မတန်မွှေးကြိုင်ပြီးအချိုမှုန့်တောင်ထပ်ထည့်စရာမလိုတဲ့မုန့်ဟင်းခါး
ဟင်းရည်၊ ငါးဖတ်များများနဲ့ အဆင်သင့်စားလို့ရချိန်မှာ...
- ရေစိမ်ထားတဲ့မုန့်ဖတ်အခြောက်တွေကို ရေနွေးလေးနဲ့ခဏပြုတ်ပြီး ဇကာနဲ့စစ်၊ ရေအေးနဲ့ပြန်ဆေး...
- ပဲစိမ်ထားတဲ့ဟာနဲနဲချန်ထားပြီး.. အကြော်မှုန့်လေးနဲ့ကြော်လိုက်တော့ ပဲကြော်လေးပါစားရတာပေါ့နော်..
- သံပုရာသီး၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ နံနံပင်..အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တာနဲ့....
Posted by စန္ဒကူး at 11:27 PM
ကျောင်းသား - စခန်းမှူးကြီးခင်ဗျား ကျွန်တော် ကော်ဖီဆိုင်မှာကိုယ်ထိလက်ရောက်
ဆာဂျင် - မင်းနာမည်ပြောပါ။
ကျောင်းသား - Batman ပါ
ဆာဂျင် - ဘာာာာာ... Batman???
ကျောင်းသား - ဟုတ်ကဲ့ Batman ပါ
ဆာဂျင် - ဒါ..မင်းငါ့ကိုလာနောက်နေတာမဟုတ်လား..
ကျောင်းသား - ဟာ..မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ
ဆာဂျင် - ဒါဆိုလဲမင်းအဖေနာမည်ရော
ကျောင်းသား - Superman (စူပါမင်း) ပါ
ဆာဂျင် - Superman??? မင်းငါ့ကိုလာနောက်ပြီးငါ့အချိန်တွေလာဖြုန်းနေတာလား
ကျောင်းသား - မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
ဆာဂျင် - မင်းပြောတော့မင်းနာမည် Batman မင်းအဖေနာမည် Superman ဆို
ကျောင်းသား - ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆာဂျင် - မင်းတော်တော်တရားလွန်နေပြီ... ငါမင်းကိုအလုပ်ခွင်မှာလာရောက်လိမ်လည်
နှောက်ယှက်မှုနဲ့ ဒဏ်ငွေခတ်မယ်။ ပေး မင်းကျောင်းသားကဒ်
ကျွန်မဘလော့မှာတင်ထားတဲ့ အကြိုက်ဆုံးဘလော့ဂါတွေနဲ့ ဆိုဒ်တွေဘာကြောင့်လဲ..
ဒါကတော့ကူးကူးမ၀င်မဖြစ်၊ တစ်ရေးနိုးတောင်ထ၀င်တဲ့ဖိုရမ်လေးပါ။ တစ်ခြားဖိုရမ်တွေနဲ့မတူဘဲ
မန်ဘာတွေအားလုံး မောင်နှမတွေလိုစည်းလုံးပြီး ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ကြတဲ့မေတ္တာရိပ်မွန်လေးပေါ့။ ရင်ဖွင့်စရာရှိရင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရသလို၊ လိုအပ်တာတွေရှိရင်လဲအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီ
အားပေးကြတယ်။ ကျမ်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ အချစ်ရေး အစုံလင်ရှိသလိုကွန်ပြူတာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့
ဒါကတော့ အကိုကြီးလိုချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ ဥဥဆိုးအောင်ရဲ့ ဘလော့လေးပါ။ သူဖြတ်သန်းလာရ
သူကစာသာရေးချင်တာ..ဘလော့သိပ်တော့မလုပ်တတ်သေးတော့ Professional blog လောက်
တော့မလှပပေမယ့် အထဲကစာတွေကတော့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ရင်ဘတ်ကိုတန်းထိစေတော့
We,She,Me ဆိုတဲ့ဘလော့လေးပါ။ သင်ခန်းစာရစရာတွေအများကြီးရှိသလိုမိသားစုနဲ့ဝေးကွာ
နေတဲ့ ကျွန်မအတွက် အဲဒီဘလော့လေးကိုဖတ်လိုက်ရင်စိတ်ချမ်းမြေ့သွားတယ်.. အပိုစာသား
တွေမပါဘူး..ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ ဘ၀အကြောင်းရာတွေ၊ လေ့လာသိမှတ်စရာတွေ
တစ်ခါဖတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ပိုစ်အဟောင်းတွေကိုပါအကုန်ရှာဖတ်ဖြစ်တယ်။ အဲလောက်ထိစွဲ
ဆောင်မှုကောင်းတဲ့ ဘလော့လေးပါ။ ဘလော့ဂါလောကအကြောင်းကိုမသိပေမယ့် မနိုင်းနိုင်း
ကတော့ စာရေးဆရာမထက်ကိုကလောင် ထက်လှပါတယ်။ ဘာသာပြန်ထားတဲ့အကြောင်း
တွေက သင်ခန်းစာရသလို.. ငယ်တုန်းက အကြောင်းအရာလေးတွေ ကိုလဲစိတ်ဝင်စားအောင်
ဒီမှာတော့ ချက်ထားလိုက်တဲ့ဟင်းပေါင်းစုံ၊ မုန့်လုပ်နည်းပေါင်းစုံ အကုန်စုံရှိတယ်။ တစ်ကယ့်
ကိုမီးဖိုချောင်လေးပါဘဲ။ တစ်ခုခုလုပ်စားချင်ရင်မမလုဘလော့ကိုပြေးဖတ် ...ပြီးသူရေးပေးထား
တဲ့နည်း အတိုင်းလိုက်လုပ်စားရတာအမောပါ။ ဓာတ်ပုံလေးတွေပါတင်ထားတော့...အောင်မလေးလေး..ပြောရင်းနဲ့တောင်ဗိုက်ဆာလာတယ်။
ဟင်းတစ်ခါမှမချက်ဖူး တဲ့သူတွေတောင် စာဖတ်ပြီးတာနဲ့ချက်နိုင်အောင်အသေးစိတ်စေ့စေ့ဌဌ ရေးထားပေးတဲ့စေတနာကို ကျေးဇူးတင်လို့ မဆုံးပါဘူး။
သူကတော့ တစ်ကယ့်ကိုဆရာကြီးပါ.. သူ့ဘလော့မှာအများကြီးရှိတယ်..ဘာအကြောင်းလဲ.
.တကယ့်ကိုလေ့လာပြီး မှ သေချာရေးထားတာပါ.အထူးသဖြင့် ဘလော့လုပ်ချင်သူများလွယ်
ကူအောင်အကြံလေးတွေပေးထားတယ်။ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေလဲရှိတယ်။ ဖတ်ကိုဖတ်
သင့်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါ။ ကူးကူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဘလော့စလုပ်တုန်းက သူကူညီခဲ့ဖူး တယ်၊ အခုတော့သူလဲမေ့လောက်ပါပြီ။ ကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ ကူးကူးကမမေ့ဘူး။
ပင့်ဂိုးကတော့ ဘလော့ဂါဆရာမလေးပေါ့။ သူ့ကိုပဒုမ္မာဖိုရမ်မှာသိနေပေမယ့်၊ အပြင်မှာလဲ
တွေ့ခဲ့ပေမယ့် ဘလော့ဂါမှန်း မသိပါဘူး။ နောက်မှကိုကြီးမျိုးတော်ကကူးကူးဘလော့လုပ်ချင် တာမသိတာတွေမေးချင်လို့ဆိုတော့ ပင့်ဂိုးရှိတယ်လေ တဲ့။ သူကအစစရာရာကူညီပေးခဲ့ပါ
တယ်။ ဒါနဲ့ ဘဲဒီဘလော့လေးပေါ်လာခဲ့တာပါ။ သူ့ဘလော့လေးမှာလဲ သူ့အတွေ့ ကြုံတွေနဲ့ စိတ်ပေါ့ပါးပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာလေးတွေရေးထားတယ်။ ခုတော့ သူအလုပ်များနေတယ်လေ။
ဥ ဥ ဆိုးအောင် ရဲ့ ကမ္ဘာလေး
ဒါကတော့ ဥဥဆိုးအောင်ရဲ့ ဘလော့မလုပ်ခင်တုန်းက multiply ဆိုဒ်လေးပါ..သူ့ချစ်ဇနီးပုံ
လေးတွေရှိတယ်။ အခုခေတ် လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားမယ့် sexy handphone wallpaper
ရိုးရိုးလေးကတော့ ပထမဆုံးရတဲ့ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းလေးပါ။ ကူးကူးဘလော့ထဲကိုမျက်စိ
လည်ပြီးရောက်လာပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ်သွားတာပေါ့။ သူ့နာမည်ကသာရိုးရိုးလေး... သူ့ဘလော့
မှာတော့ ကျွန်မတောင်နားမလည်နိုင်တဲ့ ဘာသာရေးအကြောင်းတရားတွေ၊ မြန်မာ့ရာဇ၀င်မှာထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ ရာဇ၀င်တွေကို အသေးစိတ်ရှာဖွေပြီး
တင်ပြထားသလို လူတိုင်းလေ့လာသင့်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကိုလဲ နားလည်လွယ်အောင်ဂရမ်မာတွေ နဲ့
ဒီနေရာမှာတော့ နိုင်ငံရေးတွေနဲနဲပါတယ်။ လူတိုင်းမှာကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်ရှိသလိုသိသင့်တာလေးတွေ၊ နောက်ဆုံးသတင်းလေးတွေကိုသိချင်ရင်ဝင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
vzo chat ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်တော့ အရင်ဆုံးစာတစ်စောင်ရတယ်။ သူ့ရဲ့ ဆိုဒ်လေးပါ၊ လာလည်
ပါဆိုလို့ ဒီနေ့ဘဲ ၀င်ကြည့်လိုက်တော့ မြန်မာကားတွေနောက်ဆုံးထွက်တွေကအစ၊ ဗီစီဒီသီချင်းခွေတွေပါ.အကြာကြီးစောင့်စရာမလို ဘဲကြည့်လို့ရတယ်။ အမေရိကား၊ ကနေဒါ
သွားချင် ကျောင်းတက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက်အလက်တွေနဲ့
စားပါ၊ စားပါ (In English)
ဒါကတော့ မြန်မာအစားစာတစ်ချို့ကိုဘယ်လိုချက်ပြုပ်ရလဲဆိုတာကို အင်္ဂလိပ်လိုသေချာရှင်းပြ
ရေးထားတဲ့ ဆိုဒ်လေး တစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားသားတွေမြန်မာစာစားချင်ရင် ဘယ်လိုချက်ရမလဲဆိုတာဖတ်တာနဲ့သိနိုင်တဲ့ နေရာလေးပေါ့။
ဒီဆိုဒ်လေးကိုတော့ bookmark လုပ်ထားတာကြာပါပြီ။ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပေမယ့်မင်္ဂလာဆောင်ရင်
မြန်မာထိုင်မသိမ်းနဲ့ ၀တ်စုံလေးတွေကိုအရမ်းဝတ်ချင်၊ သဘောကျလွန်းလို့ဝင်ဝင်ငမ်းတဲ့ နေရာ
လေးပါ။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲပြလို့ရတယ်လေ။ ငါတို့မြန်မာတွေမင်္ဂလာဆောင်ရင်ဒီလိုဝတ်တယ်၊ ဒီလိုအလှပြင်တယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ့်သူတွေအတွက် ခန်းမ၊ လက်စွပ်၊
မိတ်ကပ်အလှပြင်၊ ပန်းအလှပြင်၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဟန်းနီးမွန်း အားလုံးကိုဒီ ဆိုဒ်ကနေကြည့်ပြီး
Korean Star Latest News
မင်းသမီးတွေလိုရင်းနှီးနေပြီ။ သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတွေ၊ ဖက်ရှင်တွေအစုံ၊ ဓာတ်ပုံ
English Oldies' Movies
Myanmar Dress Order Online
Crunchyroll Free Online Movie
ကိုးရီးယား၊တရုတ်၊ ယိုးဒယား၊ ဖိလိပီနို၊ အစရှိတဲ့အာရှနိုင်ငံက ထွက်သမျှ ရုပ်ရှင်စီးရီးတွေ
အကုန်လုံး၊ အခွေတွေကို အလကားကြည့်လို့ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်အခုခေတ်မီလာပါပြီ...ကာလသားများအကြိုက် ဟော့ရှော့ဖက်ရှင်ရှိုးတွေ၊ ဓာတ်ပုံ
မြန်မာသီချင်းတစ်ချို့ (Myanmar Image)
Myitzuri မြန်မာဗီစီဒီ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်
ဒီမှာတော့ ခေတ်စားတဲ့ မြန်မာဗီစီဒီနောက်ဆုံးပေါ်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ချို့..အဲဒီကနေ
အရိုင်းပန်းမှာ သီချင်းတွေကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရပါတယ်။
တစ်ပတ်တစ်ခါအမြဲနောက်ဆုံးပေါ်မင်းသားမင်းသမီးသတင်းအစုံ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး..
ထိုင်းအစားအစာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် အစားသောက်အစုံကို ဘယ်လိုချက်ရလဲဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြရေးထားပေးပါတယ်။ ပုံတွေလဲပါတယ်။ စားချင်စရာတွေချည်းဘဲ။
ထမင်းစားပြီးပြီးခြင်းမှာလူအများလုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့အရာတွေထဲက ကျမ်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အချက် (၇)ချက်ကို သူငယ်ချင်းများသိအောင်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
(ကျမ်းမာရေးသုတေသီများလေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အစားစားပြီးချိန်မှာ ဆေးလိပ် (၁)လိပ်
သောက်တာ တစ်ခြားအချိန် (၁၀)လိပ်သောက်တာနဲ့ညီမျှတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ များသောအား
ဖြင့်ဆေးလိပ်စွဲနေတဲ့သူတွေ သောက်သုံးတဲ့သူတွေ ထမင်းစားပြီးတာနဲ့ ပါးစပ်ချဉ်တယ်လို့
ခေါ်မလား ဆေးလိပ်ကို တန်းသောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တာမကောင်းပေမယ့် မရှောင်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ ထမင်းစားပြီးပြီးချင်းမသောက်မိဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
ပိုပြီး ကျမ်းမာရေးထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေအရမ်းများလို့ပါ။)
(ထမင်းစားပြီးရင် အချိုတည်းတတ်တာ ကျွန်မတို့မြန်မာတွေအတွက်ကတော့ အသီးတွေ စားတာနည်းပါတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများ ကျွန်မအပါဝင် ထမင်းစားပြီးပြီးချင်းမှာ
သရက်သီးတို့ စပျစ်သီးတို့ အစရှိတဲ့အသီးတွေကိအအီပြေဆိုပြီးစားတတ်ကြပါတယ်။ မစားမိဖို့အကြံပေးရခြင်းအကြောင်းကတော့ ထမင်းစားပြီးပြီးခြင်းမှာ အသီးစားလိုက်ရင် အစာအိမ်မှာလေတွေဖောင်းပွနေတတ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် အနည်းဆုံး ထမင်စားပြီး ၁နာရီ
(သို့ )၂ နာရီခြားပြီးမှသာ(သို့) ၁နာရီကြိုတင် အသီးအနှံကိုစားဖို့တိုက်တွန်းရခြင်းပါ။)
(ဒါကတော့ကျွန်မတို့မြန်မာတွေအတွက်တော်တော်ခက်မယ်။ လဘက်သုပ်၊ လဘက်ရည်ဆိုတာ
မရှိမဖြစ်၊ မသောက်မနေမဟုတ်လား။ တစ်ခုရှိတယ်။ လဘက်ရွက်မှာပါဝင်တဲ့ အက်စစ်ဓာတ် ကအရမ်းပြင်းထန်ပါတယ်။ အဲဒီအက်စစ်ဓာတ်ကအစားအစာမှာပါဝင်တဲ့ပရိုတင်းကို အမြန်ချေဖျက် လိုက်တဲ့အတွက် အဟာရမဖြစ်စေတဲ့အပြင်အစာကြေချက်ဖို့လဲခက်ခဲစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။)
(ထမင်းစားရင် လျှော့စားမယ်..လျှော့စားမယ်.. (ပုဆိုး၊ ဘောင်းဘီ၊ ထမီ) လို့နောက်တာ ခဏခဏကြားဖူးကြမှာပါ။ အစာစားပြီးပြီးချင်း ခါးမှာတင်းကျပ်နေတာဗိုက်ကျပ်တယ်
ဆိုပြီးလျှော့ချလိုက်တာက ဗိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အူလိမ်သွားတာ.. ပိတ်သွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။)
(အစာစားပြီးပြီးချင်းရေချိုးရင် ဗိုက်ပူမယ်၊ ရေဖျင်းစွဲမယ်လို့ လူကြီးတွေခဏခဏ
သတိပေးတာကြားဖူးကြမှာပါ။ တစ်ကယ်တော့အစာစားပြီးပြီးချင်းရေချိုးရင် လက်နဲ့ခြေထောက်
သွေးစီးဆင်းမှုကို မြန်ဆန်တိုးစေပြီးတော့ အစာအိမ်အနားမှာရှိသင့်တဲ့ သွေးပမာဏကို လျော့နည်းသွားစေပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်အစာအိမ်ကြေချက်မယ့်အရေးကို
(ညနေထမင်းစားပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်လိုက်အုံးမှ၊ ထမင်းစားလို့ဗိုက်တင်းပြီ..ဗိုက်ချောင်သွားအောင်လမ်းလျှောက်လိုက်မှမလုပ်ပါနဲ့နော်။ တစ်ချို့သူတွေကပြောသေးတယ်။ အစားစားပြီးပြီး ခြင်းခြေလှမ်းတစ်ရာလမ်းလျှောက်ရင်
အသက် ၉၉နှစ်ထိကျမ်းကျမ်းမာမာနေရတယ်တဲ့။တစ်ကယ်တော့အဲဒါမမှန်ပါဘူး။ အစာစားပြီးပြီးချင်းလမ်းလျှောက်လိုက်တာဟာ အစာအိမ်က ကိုယ်စားလိုက်တဲ့အစာ တွေကိုကြေချက်နေတဲ့အချိန်မှာအစားအစာကပါတဲ့အဟာရတွေကိုယ်ခန္တာအတွက် စုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။)
(ဒါတော့ပျင်ရိခြင်း ၆ ပါးထဲကနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့..အစာစားပြီးကျောဆန့်ခြေဆန့်
လှဲခြင်တာ..အစာအဆိပ်တက်တော့အိပ်ချင်လာတာ..ကျွန်မလဲဆင်ခြင်သင့်တယ်.. စားပြီးဗုန်းဆိုအိပ်ရာပေါ်ပစ်လှဲလိုက်တာဘဲ.. ဒါမကောင်းပါဘူး။ ကိုယ်စားလိုက်တဲ့အစာတွေမကြေချက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ အစာအိမ်ရောဂါဖြစ်လာတာတို့၊ အူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ရောဂါဆိုးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသတဲ့။)
--နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ကူးကူးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဝေဌလို့ဒီအချက်တွေကိုသိရတာဖြစ်လို့ ကိုယ်သတိမမူဘဲပြုလေ့ပြုထရှိတဲ့အရာတွေ ကိုယ့်အတွက်ထိခိုက်စေတာကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ သူငယ်ချင်းတို့လဲသိပြီးရင်တစ်ဆင့်ပြန်ဝေဌဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့နော်။
လိုခင်တဲ့အကိုကြီးတစ်ယောက်၊ ကျွန်မဘာဖြစ်ဖြစ်တိုင်ပင်၊မသိတာမေးသူ့ကိုသာတွယ်နေရင်း ၅လာအကြာမှာသူအာဖရိကကိုပြောင်းသွားတော့ကျွန်မမှာစိတ်မကောင်းအရမ်းကိုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဆိုပြီးအဆက်သွယ်ဖြတ်လိုက်တာကိုလဲတွေးမိတိုင်းဝမ်းနည်းရပါတယ်။ ဒီနေ့လဲရောက်ကတည်းကအဖေလိုဖြစ်နေတဲ့ဆရာက အနောက်နိုင်ငံကိုပြောင်းတော့မယ်လို့သိ
သူ့ကိုမေး၊တိုင်ပင်စရာတွေကိုသူနဲ့အမြဲဆွေးနွေး(Personnel director) လဲဟုတ်သလိုကျွန်မရောက် ရောက်ချင်းလေဆိပ်မှာ ဟိုကြောင်ဒီကြောင်ဖြစ်မှာဆိုးလို့ရုံးကကားဒရိုင်ဘာတွေကိုမခိုင်းဘဲသူကိုယ်
တိုင်လာကြိုခဲ့တာ၊ အမြဲအားပေးခဲ့တာတွေအခုတော့သူရော သူ့မိသားနဲ့ပါခွဲရတော့မှာပါလား။
သံယောဇဉ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူး။ နောင်ဆိုသံယောဇဉ်မထားမိအောင်နေမှ။ ခံစားရတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်။လူရယ်လို့ဖြစ်လာမှတော့သံယောဇဉ်နဲ့မကင်းနိုင်ဘူး။
စိတ်တိုင်းကိုမကျနိုင်ဘူး။ကျွန်မသူများတွေနဲ့တူတဲ့နောက်ခံလဲမလိုချင်ဘူး။ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ပုံ လေးကိုနောက်ခံအဖြစ်တင်ချင်တာ။စာတွေကလဲမညီမညာဖြစ်နေတာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က တဆင့်ကိုမိုးထက်နေကိုညွှန်းလို့သူ့ကိုသွားမေး၊သူကကူလုပ်ပေးနဲ့နဲနဲတော့စိတ်တိုင်းကျလာပါပြီ။
(ဒီနောက်ခံပုံလေးက မြန်မာမြေကနေအခွာ၊ ဝေဟင်ပေါ်မှာကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲပုံလေးပါ)
Posted by စန္ဒကူး at 9:24 AM
အချစ်ဆိုတာ စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုပါ။ လူတွေကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်သလို ၀မ်းနည်းစေနိုင်တယ်။
တွေးမိတယ်။ ငါတစ်ချိန်ကျရင်တော့ကောင်လေး တစ်ယောက်တွေ့မယ်၊ရင်ခုန်မယ်၊ချစ်မယ်
ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိဘူး၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်သူ့ကို အခုထိချစ်နေဆဲပါ။ သြော်သူ့အချစ်
ရေးမယူဘဲစောင့်ထိန်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်မတော်တော်လေးစားမိပါတယ်။နောက်သူငယ်ချင်း ကောင်လေးတွေရှိသေးတယ်၊ သူတို့အမြင်ကတော့ဒီကောင်အခြောက်ပါကွာ၊ဘာညာပေါ့။
နေပြီတဲ့။ ကောင်းရော။ တစ်ရက်ကျတော့ ညနေစောင်းကြီး ကျွန်မတို့အိမ်ကိုရောက် လာပြီးတော့
တုန်တုန်ရီရီနဲ့ကြောက်လို့တဲ့။မျက်နှာကလဲဖြူဖပ်ဖြူရော်၊ဘာဖြစ်တာလဲဝိုင်းမေးကြတော့သူ့ရည်းစား များစွာထဲကတစ်ယောက်ကမော်လမြိုင်အသွားလမ်းမှာကားမှောက်ဆုံးသွားတာ၊အစိမ်းသေ၊ သူမဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာသိတယ်၊သူ့ကိုလာခြောက်တယ်..ရီချင်တယ်။အချစ်ကိုဗန်းပြပြီး
လေးနှစ်ယောက်ချစ်ကြတယ်။နောက်ရော.သ၀န်တိုမယ်၊ မနာလိုမယ်၊ စိတ်ကောက်ကြမယ်။
တော့ရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ပေါ့ပေါ့တွေးတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ဒါတွေတွေးပူနေစရာမလိုဘူး..
one go, two comes, three ready, four waiting.၊
ချစ်မိပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ဘက်က အရှုံးတွေဘဲ။ လူတစ်ယောက်ကိုချစ်မိလိုက်ပြီဆိုကတည်းက
ဆက်တိုက်ကိုရှုံးတော့တာဘဲ၊ ဇယားကွက်နဲ့သေချာတွက်ကြည့် (ငွေကြေးမပါဘူး)၊
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကကိုယ့်ကိုလဲထပ်တူထပ်မျှ ချစ်ရင်တစ်မျိုး၊ မချစ်ရင်တော့ခံပေတော့...
Posted by စန္ဒကူး at 8:59 PM
သူဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ ငါစိတ်တို၊ ဒေါသဖြစ်တာကို ထိန်းလိုက်တာ သံချောင်းကိုခြံစည်းရိုးမှာ
ကောင်းပြီသား.. စိတ်တိုတာ၊ဒေါသဖြစ်တာတွေလုံးဝမရှိတော့တဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီး နေ့တိုင်း သားအရင်က
စိတ်တို၊ ဒေါသထွက်တိုင်းရိုက်သွင်းခဲ့တဲ့ခြံစည်းရိုးက သံချောင်းလေးတွေကို ပြန်နုတ်ပါ။
ဒီလိုနဲ့ ရက်ကြာလာတာနဲကအမျှ ခြံစည်းရိုးမှာ ရိုက်ထားခဲ့တဲ့သံချောင်းလေးတွေလဲကုန်သွားတယ်။
လက်နဲ့ အနာတစ်ရဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အရာထက်၊ စကားနဲ့အနာတစ်ရဖြစ်အောင်လုပ်တာ ပိုပြင်းထန်
တယ်။ လျှာတစ်ချောင်းဟာဓားသွားထက် ပိုထက်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်။
ကျွန်မမှာလဲ အဲလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းလေးတွေရှိသလို.. သူငယ်ချင်းတို့မှာလဲရှိမယ်လို့
အကယ်လို့ ကူးကူးဒေါသစိတ်နဲ့ ပြောမိခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းက သူငယ်ချင်းတို့ရင်ထဲမှာ ဒဏ်ရာအနေနဲ့
Posted by စန္ဒကူး at 11:13 PM
ကျမ်းမာခြင်းသည်လဘ်တစ်ပါးလို့ဆိုစကားရှိတယ်မဟုတ်လား... ကျွန်မကတော့သိပ်မကျမ်းမာပေမယ့် အခြေခံလိုက်နာသင့်တဲ့အချက်အလက်တစ်ချို့ ကို သူငယ်ချင်းတွေလည်းသိအောင်ဝေဌချင်လို့ပါ။
၂။ လောလောလတ်လတ်ဖုတ်/ကင်ပြီးပြီးချင်းပေါင်မုန့်ကိုမစားပါနဲ့။ (ပူမှာစိုးလို့ထင်တယ်)
၃။ battery charger, phone charger, စသည်တို့နဲ့ဝေးဝေးမှာနေပါ။
၄။ မနက်ပိုင်းမှာရေများများသောက်ပြီး ညပိုင်းမှာလျှော့သောက်ပါ။
၇။ အကောင်းဆုံးအိပ်ချိန်တွေကတော့ ည (၁၀) နာရီကနေ မနက် (၆) နာရီအထိပါ။
၈။ ညနေ (၅) နာရီကျော်ရင် အစာအများကြီးမစားပါနဲ့တော့။
၉။ အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင် သောက်တတ်မယ်ဆိုရင် တစ်ရက် တစ်ခွက် ထက်မပိုမိပါစေနဲ့။
၁၀။ ဆေးသောက်ရင် ရေခဲရေ နဲ့ မသောက်ပါနဲ့။
၁၁။ ဆေးသောက်ပြီးပြီး ခြင်းမှာ အိပ်ရာထဲချက်ချင်းမလဲချပြီးလှဲမနေပါနဲ့ ။
၁၂။ တစ်ရက်ကို ၈ နာရီကြာအောင်အိပ်စက်အနားယူပေးပါ။ အိပ်ချိန်မပြည့်ရင်လူကရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။
၁၃။ မနက်အစောကြီးထပြီးမပြေးနိုင်ရင်.. ညနေ ၅-၈ နာရီကြားက အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်တဲ့အချိန်ပါ။
၁၄။ ဖုန်း အားသွင်း (charge) နေတဲ့အချိန်မှာ လုံးဝဖုန်းမပြောပါနဲ့...
၁၅။ ဖုန်းနားထောင်ရင်.. ဘယ်ဘက်နားနဲ့ နားထောင်ရင် ဦးနှောက်ရဲ့ ညာဖက် ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်ပျက်ဆီးစေပါတယ်။
၁၆။ သီချင်းနားထောင်တဲ့အခါဖြစ်စေ.. earphone ကိုအကြာကြီးမသုံးပါနဲ့... အနဲဆုံး ၁ နာရီခြားနားကို အနားပေးပါ။
Posted by စန္ဒကူး at 10:33 PM
တစ်ခုခုစားချင်ပြီဆိုရင်ရေခဲသေတ္တာကိုသွားဖွင့်ကြည့်တာအကျင့်လိုဖြစ်နေပြီ... အိမ်မှာတော့ အုပ်ဆောင်းကိုလှန်ကြည့်တာ.. ဒီမှာတော့ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ချက်မှစားရမှာဆိုတော့ ရေခဲသတ္တာကိုဖွင့် ဟိုချောင်းကြည့်ဒီချောင်းကြည့်...
အပေါ်ဆုံးကာထားတဲ့အထဲမှာ တော့..ချောကလက်ပေါင်းစုံကိုထည့်ထားပါတယ်.. လက်ဆောင်ရတဲ့ဟာတွေရော.. အဝေးကနေပို့ပေးတဲ့ချောကလက်တွေရော.. ဆရာတွေခရီးကပြန်လာတိုင်းပေးတဲ့ ချောကလက်တွေအကုန်ပြုံပြီးထည့်ထားတာပါ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့.. မြန်မာပြည်ကယူလာတဲ့ readymade စားစရာတွေ၊ မုန့်ဟင်းခါးထုပ်၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ လဘက်နဲ့အကြော်စုံ၊ ဘလချောင်ကြော်၊ မရမ်းသီးငပိကြော်၊ ဆတ်သားခြောက်ကြော်၊ ဗူးပန်းရောင်ထဲမှာတော့ မာမီကြော်ပေးလိုက်တဲ့ မန်ကျည်းသီးပုဇွန်ခြောက်ကြော်၊ ပြီးတော့ စင်ကာပူက ပို့ပေးတဲ့ Tom Yum နဲ့ အုန်းနို့အနှစ် ပုလင်း၊ နို့စိမ်းတစ်ဗူး၊ နို့ဆီတစ်ဗူး (fruit salad လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဝယ်ထားတာ)၊ ပြီးတော့ နှမ်းပျစ်၊ ကျောက်ဖရုံယို၊ အမြဲစားနေတဲ့ cheese Slice၊ နောက်ပုလင်းအဖြူနဲ့က တစ်ကူးတစ်က အမေရိက ကပို့ပေးတဲ့ ပဲမှုန့်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့...ပေါ့ပေါ့လေးတွေဘဲထားတော့တယ်.. လေးလွန်းလို့ ကျိုးခါနီးနေပြီ...
Garden ပေါင်မုန့်ကြမ်း၊ ပန်းခြောက်ထုပ်၊ ရေညှိ (sushi လုပ်စားဖို့)၊ ပြီးတော့ ကြက်သွန် ဖြူ နီကို blender နဲ့ တစ်ခါထဲမွှေပြီး ထည့်ထားတာ..ချက်တဲ့အခါ အဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင်... (ပျင်းတာ...ပျင်းတာ)
နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့... ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲမှာ.. မက်မန်းသီး၊ အချဉ်ထုပ်၊ မရမ်းယို၊ ဇီးထုတ်၊ အစုံ။ ကီဝီသီး၊ ကြက်ဥ အဖြူ၊ အညိုက နောက်မှာ
အောက်ဆုံးဗုံးထဲက အကန့်မှာတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၀ယ်သမျှကိုထည့်ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ဂေါ်ဖီတစ်လုံး၊ ငရုတ်သီး၊ နံနံပင်၊ ပဲတီပေါက်၊ ကြက်ဟင်းခါးသီးတစ်လုံးနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး တွေရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ဈေးပိတ်တော့ ဈေးမသွားရဘူး။
အပေါ်ဆုံးအတန်းမှာ LUPAK Butter , Salted & Unsalted တွေများကြီး..၀ယ်ထားတယ်.. အဲဒါ တစ်ခါတစ်လေညဖက်ဗိုက်ဆာရင် ပေါင်မုန့်နဲ့ စားတာလေ..
နောက်တစ်တန်းမှာတော့ ယိုပေါင်းစုံ၊ အုန်းယို၊ မြေပဲယို၊ Blueberry၊ အစုံ..အဲဒါ ပေါင်မုန့်နဲ့စားဖို့ ဆိုဘဲ...
ဘေးမှာတော့ ပုလင်းလေးသုံးလုံး..ဘာလဲသိလား... ဆီတိုဖူး.... ဒီမှာမရှိဘူး... အဲဒါ ပူပူ က ၀ယ်လာတာ..
နောက်တစ်တန်းမှာတော့ ပူပူ လေဆိပ်က ၀ယ်လာတဲ့ ၀ိုင်တစ်ပုလင်းရှိတယ်.. ကူးကူးမသောက်ဘူးနော်.. ပလတ်စတစ်တောင်မဖွင့်ရသေးဘူး..ဒီက custom ရစ်ရင်ပေးမလို့..မရစ်တော့လို့ ပြန်ယူလာတာ.. ပြီးတော့ ဧည့်သည်လာရင်တိုက်တဲ့ buko juice ၊ ကူးကူးလဲအရမ်းကြိုက်တယ်..အုန်းစိမ်နုနုလေးအရည်..အဖတ်လေးတွေလဲပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ရေဗူးတွေ.. နဲ့ Cheese butter တစ်ပုလင်း။
အောက်ဆုံးမှာ တော့..cheese အခဲလိုက်တွေပါ... ၅တုံးလောက်ရှိမယ်.. Christmas တုန်းကသူများလက်ဆောင်ပေးထားတာတွေ... မစားနိုင်လို့ အဲဒီမှာဘဲထည့်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ Sprite တစ်ဗူး၊ ပန်းသီး ဖျော်ရည်ဗူးကြီးတစ်ဗူး နဲ့.. ရေဗူးလေးတစ်လုံး ( donut's ဆိုင်ကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာ)
အပေါ်ဆုံးမှာတော့ ရေခဲလေးတွေလုပ်ထားတယ်.. ပြီးတော့ အသားငါးတွေထားတယ်.. ရေခဲမုန့်တွေလဲထားတယ်...
နို့ဗူး အပြင်ရောက်နေတာ.. ပူတင်းလုပ်တာလေ..ဒါကြောင့်..
ဒါတွေကတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲက ပစ္စည်းတွေပေါ့... မှန်ဗီရိုထဲကဟာတွေနောက်နေ့ဆက်မယ်...ဟီးဟီး...
Posted by စန္ဒကူး at 10:35 PM